တရုတ်နိုင်ငံမှ Treme-HA® Hyaluronic acid သည် သဘာဝ အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံမှ |Focusfreda
အစားအသောက်/ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ထုတ်ကုန် ကုန်ကြမ်းများ
Treme-HA® Hyaluronic acid သည် သဘာဝအပင်ထွက်ပစ္စည်းများမှဖြစ်သည်။
Treme-HA® သည် မြင့်မားသော ထိရောက်မှု အငွေ့ပြန်မှုမှ ထုတ်ယူရရှိသော အပင်အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်သည်။
Tremella သည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း နှင့် အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိ ရှိသည်။ရေတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ပျော်ဝင်နိုင်သော ပိုလီမာ၊ ပျမ်းမျှ မော်လီကျူးအလေးချိန်သည် ဒါဒါတစ်သန်းကျော်ရှိပြီး မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ ကျောရိုးသည် အယ်ဖာ (1-3)-glycosidic နှောင်ဖွဲ့မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မန်နန်ဖြစ်ပြီး၊ glucuronic acid ဖြင့် အကိုင်းအခက်ကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။xylose နှင့် fucose စသည်တို့၏ တက်ကြွသော အစိတ်အပိုင်းသည် အယ်ဖာ (၁-၃) -mannan ၏ ဘုံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း၊
Treme-HA® အလှကုန်အဆင့် Tremella Fuciformis Polysaccharide
အဖြူ သို့မဟုတ် အဖြူနီးပါး အမှုန့် သို့မဟုတ် အမှုန့်
ထိရောက်မှု မြင့်မားသော အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း- အရေပြားဆဲလ်များ၏ ရေဓာတ်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး အရေပြား၏ stratum corneum ၏ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
Antioxidant aging: free radicals တွေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်စွမ်း၊ ကြွက်သားဆဲလ်တွေရဲ့ ရှင်သန်မှုကို တိုးစေတယ်၊ ​​အရေပြားအိုမင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေတယ်၊ ​​အရေပြားကို ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်၊
အရေပြားခံစားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်- Treme-HA သည် အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး ပျစ်နိုင်မှု မြင့်မားသည်။အသုံးပြုပြီးနောက် အသားအရေကို
အနံ့အနည်းငယ် သို့မဟုတ် အနံ့မရှိသော လက္ခဏာများ
မန်ကျည်းသီး သို့မဟုတ် မက်မွန်သီး
glucuronic acid ကို စစ်ဆေးခြင်း။
စုစုပေါင်း saccharide ၏စစ်ဆေးမှု
pH (0.5% aq. sol.၊ 25 ℃)
၅.၅ မှ ၈.၀
ထုတ်လွှင့်မှု (0.1% aq. sol.၊ 25 ℃)
သတ္တုအကြီးစား (Pb အဖြစ်)
ထုတ်ကုန်ကို အလုံပိတ်ထားပြီး အေးပြီး မှောင်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
၂၄ လ(မဖွင့်ရသေးသော ထုပ်ပိုးမှု)
Treme-HA® သည် အရေပြားဆဲလ်များ၏ ရေဓာတ်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး အရေပြား၏ အစိုဓာတ်ကို တိုးမြင့်စေပါသည်။အရေပြားအပေါ်ယံရှိ အစိုဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် အစိုဓာတ်ထိန်းဖလင်အလွှာတစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ရေဓာတ်ထိန်းထားမှုနှင့် ရေဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်မှု နှစ်ခုပါရှိသည်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်။
superoxide radical နှင့် hydroxyl radical တို့ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် cytolipin ၏ peroxidation ကို ဟန့်တားကာ အရေပြားဆဲလ်များ၏ ရှင်သန်မှုကို တိုးမြင့်ပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားအိုမင်းခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်။ဒီတော့ Treme-HA®အရေပြားအိုမင်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေပြီး ပျက်စီးနေသော အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Treme-HA® သည် မြင့်မားသော မော်လီကျူး ပိုလီမာ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရေပြား ရင်းနှီးမှုနှင့် ပျစ်စွတ်မှု မြင့်မားသည်။Treme-HA® ပါ၀င်သော အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီးနောက် ချောဆီအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သိသာထင်ရှားပြီး အသားအရေသည် စိုစွတ်ချောမွေ့ကာ ခြောက်သွေ့တင်းမာမှုမရှိဘဲ စိုစွတ်နေပါသည်။
အကြံပြုထားသော အသုံးပြုမှု- 0.01%-0.5%
အသုံးပြုမှု- ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ရေတွင် တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
အသုံးချမှုများ- အထူးသဖြင့် အနှစ်သာရ၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ ဆေးရည်၊ တိုနာနှင့် အခြားအလှကုန်များအတွက်။
အမြန်ရထား၊ Qufu၊ Jining၊ Shandong ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အသစ်
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021 : All Rights Reserved.Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ